इन्भेष्टमेण्ट बैंक पनि बिगमर्जमा जाने - नेपालबहस
भारतमा गणतन्त्र दिवस सम्पन्न, भारतीय सेनाद्धारा भव्य सैन्य प्रदर्शन
अजोड इन्स्योरेन्सको शेयरमा दुईवटा क्यापिटल बसे अण्डरराइटर
११० बालबालिकाहरुलाई सेञ्चुरी बैंककाे न्यानाे लुगा
आधिकारिक रुपमा नै फुट्यो बीमक संघ
नेपालको विदेश नीति अराजक भीडको जिम्मामा, परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह
अल्लो कोटको माग बढेपछि बजार धान्न मुस्किल !
बुद्ध एयरले उडान गन्तव्य थप्दै
टुरिष्ट बस एशोसिएशनको अध्यक्षमा शर्मा निर्विरोध
खुर्सानीको धुलो आँखामा छर्केर ५० लाख लुट्ने ६ जना पक्राउ
सरकारी एम्बुलेन्समा ३१ किलो गाँजा तस्करी !
कोरोना भाइरस नेपालमा भेटियो, सचेत रहन विज्ञको आग्रह
ज्ञानेन्द्रको कप्तानीमा विश्व क्रिकेट लिग खेल्ने टोलीको घोषणा
इन्भेष्टमेण्ट बैंक पनि बिगमर्जमा जाने
२८ पुष, काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैकको आज राजधानीमा सम्पन्न ३३ औं वार्षिक साधारणसभाले बिगमर्जमा जाने नीति पारित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत वाणिज्य बैंकहरुलाई बिगमर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिरहेका बेला इन्भेष्टमेण्ट बैंकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आज बसेको साधारणसभाले नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सलाई गाभ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि बैंकले जेबिल्स फाइनान्स र एस डेभलपमेण्ट बैंकलाई गाभिसकेको छ ।
साधारणसभालाई संबोधन गर्दै बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले भने– “अब खुद्रे होइन, बिगमर्जरमा नगई उपाय छैन ।” बैंकको सञ्चालन खर्च धेरै नै बढ्न थालेकोले पनि बिग मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनले स्पष्ट गरे ।
पछिल्लो अवस्थामा इन्भेष्टमेण्ट बैंकको ऋणमा समस्या देखिएको छ । खासगरी तनहुँ हाइड्रोपावर, मेलम्ची सीएमसी र ऋद्धिसिद्धि टायलको ऋणमा समस्या देखिएकाले बैंकलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । यसवापत बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।
अब धेरै वाणिज्य बैंक भन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हामी कस्सिनु पर्छ भन्दै उनले बिग मर्जरमा जानका लागि आफूले अध्यक्ष पदसमेत त्याग्ने बताए । हामीलाई राष्ट्र बैंकबाट समेत आग्रह गरिएकाले अब छिट्टै कुनै ‘क’ वर्गकै बैंकसँग मर्जर गर्ने तयारी गरेका छौं – अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
बैंकको साधारणसभाले ८.५ प्रतिशत लाभांश र १०.५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको छ ।
अघिल्लो लेखअभावमा बाँचेकी चमेलीलाई मुक्तिनाथ विकास बैंकको साथ
अर्को लेखसहयोगीलाई गाभ्दा पनि सिटिजन्सको शाखा ९९ मात्रै
ज्योति विकास बैंकको बाह्रौँ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३२ करोड पुग्दा किन घट्यो प्रतिशेयर आम्दानी ?
महालक्ष्मी विकास बैंकले घटायो खराब कर्जा, स्प्रेडदर घटाउने मुख्य चुनौती
निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि सुस्त, शेयर बजारमा वास्तविक मूल्य भन्दा बढीमा किन हुदैछ काराेबार ?
एसबीआई बैंक थप समस्यामा पर्न सक्ने ! स्प्रेडदर ५ प्रतिशत माथि,अधिकांश सूचक सुस्त गतिमा